UZungu ubona uhulumeni esenzele phansi isizwe - Ilanga News
Home Izindaba UZungu ubona uhulumeni esenzele phansi isizwe
UZungu ubona uhulumeni esenzele phansi isizwe
Uthi kuhlale obala ukuba ntekenteke kwengalo yomthetho
UMENGAMELI wamaZulu FC, uMnu Sandile Zungu ekhuluma namalungu omphakathi namavolontiya abeyokwelekelela umkhankaso wokukhuculula
izitolo nezindawo ezilinyaziwe, zashiswa ngesikhathi kunemibhikisho nokutatshwa kwempahla enxanxatheleni yezitolo esesiteshini KwaMashu ISITHOMBE NGU: YOLA NDZABE
USOLA uHulumeni wase-Ningizimu Afrika ngoku-hudula izinyawo ekubopheni izigilamkhuba ezicekele phansi amabhizinisi abo uMengameli weBlack Business Council, uMnu Sandale Zungu, ophinde abe ngusihlalo wamaZulu FC, agijima kwiDStv Premiership.
Sekuwumlando ukuthi lolu dla-me olwaqubuka KwaZulu-Natal, lwanabela eGauteng, emuva koku-zinikela kukaMnu Jacob Zuma emaphoyiseni ngobusuku bango-mhla ka-7 kwephezulu – njengoba wagwetshwa izinyanga eziwu-15 yiNkantolo yoMthethosisekelo ngokudelela umyalelo wayo – lu-shiye kukhalwa njengoba kubhujiswe amabhizinisi abeqashe inqwaba yabantu.
Izitolo zokudla ezihamba pha-mbili ngokuqasha abantu aba-mnyama, okubalwa kuzo uSpar, uShoprite noBoxer, zishayeke kakhulu kulolu dlame.
Ekhuluma neLANGA izolo ngeSonto, uMnu Zungu – ongowoku-dabuka eMlazi – uthe balokhu be-qhubekile nezingxoxo nohulumeni wakuleli emazingeni ahlukene.
Uthi kodwa okukhathaza kakhulu wukuthi uhulumeni uhudula izinyawo ekubopheni abenzi bobubi.
“Siyasigxeka kakhulu isenzo sa-bantu bakuleli ngokudala umona-kalo wezigidi ngezigidi zamarandi, okubeka ikusasa lemindeni emi-ningi engcupheni, ngenxa yokuthi amanye amabhizinisi azothatha isikhathi eside ukuvuka.
“Kumele ngabe ngalesi sikhathi yinqwaba yabantu asebeboshiwe kwazise ubufakazi busobala.
“Okucacile wukuthi uhlaka lwa-maphoyisa kalunalo ukhakhayi oluqinile ukubhekana nezimo eze-nzekile. Bekumele amaphoyisa azame ngendlela yonke ukugwema le nto eyenzekile. Empeleni uhulumeni udlale kakhulu ngathi ngo-ba okulandelayo wububha obuzo-dlanga esizweni esimpisholo, oku-ngezona izindaba ezimnandi.
“Sibhekene nesimo ezinzima siyizwe ngoba abatshalimali ba-zokuba manqika ukufaka imali yabo ezweni elingenazo izinsiza zokugwema izimo ezifuze lesi.
“Sizokuba nemindeni eminingi ehlwempu, kanti kuzoba nzima ukuvuka kulesi simo.
“Kumele kuqhanyukwe nama-qhinga aphusile ukuzama ukufu-kula izwe emuva kwalo monakalo,” kusho uMnu Zungu iqembu lakhe ebelisenxanxatheleni yezitolo, iBridge City, KwaMashu, izolo ngeSonto.
Uthe ukuya kwabo bewuSuthu kule nxanxathela yezitolo – ebalwa nezishayekile kulolu dungunyane – wukuthi bebeyokhuthaza abala-ndeli, babanike ithemba ngesimo esenzekile.
Utshele ILANGA ukuthi njengoba ikomkhulu labo kuwuMbelebele, lifana nensika yeqembu, bekubalulekile ukuba babekhona ukukhuthaza imindeni nabalandeli abawa bevuka nekilabhu yize kubhoke iCovid-19 eNingizimu Afrika.
“KwaMashu besiyobheka ukuthi sinjani isimo, siqinise abalandeli bethu idolo, sibheke nezinhlelo esingalekelela ngazo siyikilabhu neBlack Business Council, ukuzama ukubuyisa ukuzethemba kubalandeli nomphakathi wonke wase-Ningizimu Afrika ohlukumezekile ngalesi simo.
“Kumele sifunde isifundo ngale nto eyenzekile ukuze ingaphinde yenzeke. Okugqamile wukuthi use-mkhulu umsebenzi obhekene nesizwe esimpisholo, kwazise kuvele obala ukuthi kasilingani,” kusho uMnu Zungu ofike kumaZulu FC washintsha izinto, okwenze leli qembu laqeda isizi lilele endawe-ni yesibili kwi-log yeDStv Premier-ship.
Ngalokho lizibekisele indawo kwiCAF Champions League elizobe liyigijima okokuqala selokhu kwathi nhlo.
Previous articleBageqa amagula abasinde bebulawa
Next articleUBenni nenselelo kwiChiefs neBucs